शेयर वितरण गर्न लागेकाे जनरल इन्स्योरेन्सकाे यस्ताे छ वित्तीय अवस्था
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएसँगै जनरल इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन तयारीमा छ ।
IPO निकाष्शन गर्न लागेको यो कम्पनीको वित्तिय अवस्था कस्तो छ भन्नेबार भने कमै लगानीकर्ता जानकार छन् ।
कम्पनीको वित्तीय अवस्था यस्ताे छ-
कम्पनीले गत आ.ब.मा अघिल्लो आवको भन्दा ३९ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको छ । कम्पनीले गत आवमा ५ करोड ६ लाख नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आवमा भने कम्पनीले ३ करोड ६२ करोड लाख नाफा कमाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी भने ७० करोड रहेको छ । आईपीओ निष्काशन पछि कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्बको पुग्ने छ ।
यस्तै, कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११४.६८ छ । गत आवसम्म कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. ४ करोड ६६ लाख र बीमा कोषमा रू. ५ करोड १० लाख जम्मा गरेको छ । अघिल्लो आवमा उक्त कोषमा रु. २ करोड ८६ लाख थियो ।
यस्तै, बीमा शुल्क तर्फ पनि कम्पनीको सफलता देखिएको छ । कम्पनीले गत आवमा रू. ५३ करोड ६९ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुुन अघिल्लो आवको तुलनामा ६१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ३३ करोड २५ लाख बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ७.२३ रुपैयाँ रहेको छ ।
« न्याय नपाएकाे भन्दै बलात्कृत किशाेरीद्वारा आत्महत्या
एप्पलको दुई नयाँ वाच सिरिज सार्वजनिक »